Bit By Bit - Running fanandramana - 4.5.1.1 Ampiasao misy tontolo
Afaka mihazakazaka fanandramana ao anatin'ny tontolo misy, matetika tsy misy Coding na fiaraha-miasa.
Logistically, ny fomba tsotra indrindra hanao nomerika fanandramana dia hapetaka ny andrana amin'ny tampon'ny misy tontolo iainana, manampy anao mba mihazakazaka ny saha nomerika fanandramana. Ireo fanandramana azo mihazakazaka amin'ny ambaratonga lehibe ara-drariny sy tsy mitaky fiaraha-miasa amin'ny orinasa na be dia be rindrambaiko fampandrosoana.
Ohatra, Jennifer Doleac sy Lioka Stein (2013) nanararaotra ny tsena an-tserasera (ohatra, craigslist) mba mihazakazaka fanandramana ara-poko izay norefesiny ny fanavakavahana. Doleac sy Stein an'arivony iPods dokam-barotra, sy amin'ny fomba samihafa ny toetra mampiavaka ny mpivarotra, dia afaka mianatra ny vokatry ny hazakazaka eo amin'ny varotra ara-toekarena. Ankoatra izany, Doleac sy Stein nampiasa ny maridrefy ny andrana ny maminavina raha ny vokany dia lehibe kokoa (heterogeneity ny fitsaboana vokatry) ary manolotra hevitra momba ny antony ny fiantraikan'ny mety hitranga (rafitra).
Talohan'ny ny fianarana ny Doleac sy Stein, nisy roa lehibe ny tamin'ny andrana mirefy fomba fanavakavahana. Ao amin'ny taratasy fampianarana mamorona mpikaroka nitohy ny noforonin'ny eritreritra ny olona samy hafa volon-koditra sy mampiasa ireo nitohy to, ohatra, mampihatra ny asa samy hafa. Bertrand sy Mullainathan ny (2004) taratasy miaraka amin'ny tsy hay hadinoina lohateny hoe "no Emily sy Greg More Employable Noho ny Lakisha sy Jamal? Saha Fanandramana amin'ny tsenan'ny asa Fanavakavahana "dia mahafinaritra fanoharana ny fifandraisana an-taratasy ny fianarana. Taratasy fanadihadiana manana vidiny ambany dia ambany somary isaky ny fandinihana, izay mahatonga tokana mpikaroka mba hanangona an'arivony ny fandinihana ao amin'ny fianarana mahazatra. Nefa, taratasy fampianarana ny fanavakavahana ara-poko no nanontany anarana satria mety hamantarana zavatra maro ankoatra ny hazakazaka ny mpangataka. Izany hoe, anarana toy ny Greg, Emily, Lakisha, ary Jamal mba hamantarana kilasy sosialy, ankoatra ny firazanana. Araka izany, misy fahasamihafana eo amin'ny fitsaboana ho an'ny nitohy ny Greg Jamal ny sy ny mety ho noho ny mihoatra noho ny hazakazaka heverina fahasamihafana ny mpiadina. Fanaraha-maso ny fianarana, amin'ny lafiny iray hafa, tafiditra amin'ny fandraisana mpiasa avokoa ny foko mpilalao samihafa mba hampihatra amin'ny olona ho an'ny asa. Na dia fianarana fanaraha-maso dia manome famantarana mazava ny mpangataka firazanana, tena lafo vidy izy ireo isan-fandinihana, izay midika fa matetika izy ireo ihany no jatony ny fandinihana.
Ao anatin 'ilay saha nomerika fanandramana, Doleac sy Stein dia afaka mamorona iray tsara tarehy mifangaro. Izy ireo hanangona angon-drakitra afaka amin'ny vidiny ambany dia ambany somary isaky ny fandinihana-niafara tamin'ny fandinihana an'arivony maro (toy ny eo amin'ny taratasy fianarana) -ary izy ireo dia afaka mampiasa sary famantarana hazakazaka-niteraka mazava uncounfounded famantarana ny hazakazaka (toy ny tao amin'ny fanaraha-maso ny fianarana ). Noho izany, ny tontolo iainana an-tserasera indraindray manome fahafahana mpikaroka mba hamorona fitsaboana vaovao izay manana fananana izay sarotra hanorina raha tsy izany.
Ny dokam-barotra ny Doleac iPod sy Stein samihafa niaraka lafiny telo lehibe. Voalohany, dia samihafa ny toetoetry ny mpivarotra, izay nanamarika ny tànany mihazona ny iPod sary [fotsy, mainty, fotsy amin'ny tatoazy] (Sary 4.12). Faharoa, dia Niovaova ny mangataka vidiny [$ 90, $ 110, $ 130]. Fahatelo, dia samihafa ny hatsaran'ny ny dokam-barotra lahatsoratra [-kalitao avo sy iva-kalitao (ohatra, capitalization diso sy ny spelin fahadisoana)]. Noho izany, ny mpanoratra nanana 3 X 3 X 2 famolavolana izay napetraka manerana mihoatra ny 300 ao an-toerana tsena miainga amin'ny tanàna (ohatra, Kokomo, IN sy North Platte, NE) ny Mega-tanàna (ohatra, New York sy Los Angeles).
Figure 4.12: Tanana ampiasaina amin'ny fanandramana ny amin ' Doleac and Stein (2013) . iPods no namidy ny mpivarotra miaraka amin'ny toetra samy hafa mba handrefy ny fanavakavahana ao amin'ny tsena an-tserasera.
Nahatratra manerana toe-javatra rehetra, ny vokatra dia tsara ho fotsy noho ny mainty mpivarotra mpivarotra, ny tatoazy kafa mpivarotra manana vokatra. Ohatra, mpivarotra fotsy nahazo tolotra bebe kokoa ary nanana fivarotana farany ambony ny vidin'ny. Ankoatra ireo vokany eo ho eo, Doleac sy Stein tombanana ny heterogeneity ny vokatry. , Ohatra, iray faminaniana avy aloha fa ny fanavakavahana teoria dia mety ho kely eo amin'ny tsena izay mifaninana kokoa. Nampiasa ny isan'ny tolotra nahazo toy ny hisolo ny tsena fifaninanana, ny mpanoratra hita fa mpivarotra mainty no mahazo ratsy tokoa tolotra eo amin'ny tsena amin'ny ambany ny fifaninanana. Ankoatra izany, ny mampitaha ny dokam-barotra ho an'ny vokatra avo-kalitao sy ny ambany-kalitao lahatsoratra, Doleac sy Stein nahita fa dokambarotra toetra tsy fiantraikany ny tombon-dahiny miatrika ny mainty sy ny tatoazy mpivarotra. Farany, ny fanararaotana ny zava-misy fa ny dokam-barotra no napetraka tao maherin'ny 300 tsena, ny mpanoratra mahita fa mainty mpivarotra ireo sahirana kokoa amin'ny tanàna avo tahan'ny asan-jiolahy sy ny fonenana avo fanavakavahana. Tsy misy amin'ireo vokatra manome antsika ny fahatakarana mazava tsara ny tena antony mainty hoditra mpivarotra nanana vokatra ratsy kokoa, saingy, rehefa mitambatra amin'ny hafa ny vokatry ny fianarana, dia afaka manomboka ny mampahafantatra teoria momba ny mahatonga ny fanavakavahana ara-poko ao amin'ny karazana fifanakalozana ara-toekarena.
Ohatra iray hafa izay mampiseho ny fahafahan'ny mpikaroka mba fitondran-tena an-tsaha dizitaly fanandramana eo amin'ny rafitra misy dia ny fikarohana ny Arnout van de Rijt sy ny mpiara-miasa aminy (2014) teo ny fanalahidy ho fahombiazana. Amin'ny lafiny maro eo amin'ny fiainana, toy izany koa ny olona toa hiafara amin'ny vokatra hafa mihitsy. Ny iray mety ho fanazavana ho an'ny izany toromarika dia ny kely indrindra-ary sendra-tombony mety hanidy-in ary mitombo rehefa mandeha ny fotoana, ny dingana izay mpikaroka hoe fitambaran'ny tombony. Mba hamaritana na kely fahombiazana voalohany hanidy-in na fahalazon'ny, van de Rijt sy ny mpiara-miasa aminy (2014) -tsehatra ho efatra samy hafa rafitra bestowing fahombiazana amin'ny tsapaka nofantenana mpandray anjara, ary avy eo dia norefesiny ny maharitra fiantraikan'ny ity fahombiazana jadona.
More manokana, van de Rijt sy ny mpiara-miasa 1) nampanantena vola mba tsapaka voafantina tetikasa amin'ny kickstarter.com , ny fanangonam-bola tranonkala; 2) tsara laharana tsapaka voafantina hevitra ao amin'ny tranonkala epinions ; 3) dia nanome mari-pankasitrahana mba tsapaka voafidy anjara amin'ny Wikipedia ; ary 4) nanao sonia fangatahana voafantina tsapaka amin'ny change.org . Nahita ny mpikaroka tena mitovy vokatra manerana rafitra efatra: isaky ny tranga, mpandray anjara izay tsapaka nomena tany am-boalohany ny sasany fahombiazana tamin'i kokoa tatỳ aoriana noho ireo fahombiazana tanteraka raha tsy izany indistinguishable mpiara-mianatra (Sary 4.13). Ny zava-misy fa mitovy niseho tamin'ny maro dia mampitombo ny ivelany rafitra manan-kery ireo vokatra satria mampihena ny vintana fa izany toromarika dia artifact ny rafitra manokana.
Figure 4.13: Long-teny vokatry ny tsapaka nomena fahombiazana amin'ny rafitra ara-tsosialy efatra samy hafa. Arnout van de Rijt sy ny mpiara-miasa aminy (2014) 1) nampanantena vola mba tsapaka voafantina tetikasa amin'ny kickstarter.com , ny fanangonam-bola tranonkala; 2) tsara laharana tsapaka voafantina hevitra ao amin'ny tranonkala epinions ; 3) dia nanome mari-pankasitrahana mba tsapaka voafidy anjara amin'ny Wikipedia ; ary 4) nanao sonia fangatahana voafantina tsapaka amin'ny change.org .
Miara, ireo ohatra roa mampiseho fa afaka hitarika dizitaly mpikaroka saha fanandramana tsy misy ny ilaina ny mpiara-miasa amin'ny orinasa na ny mila manorina rafitra sarotra niomerika. Ankoatra izany, Table 4.2 vao mainka manome ohatra izay mampiseho ny isan-karazany ny zavatra azo atao rehefa mampiasa ny foto-drafitr'asa mpikaroka ny efa misy rafitra mba hamonjy fitsaboana sy / na fepetra vokatra. Ireo fanandramana ireo somary mora ho an'ny mpikaroka sy ateriny ho ambony ny realism. Nefa, ireo mpikaroka manolotra fanandramana voafetra fanaraha-maso ny mpandray anjara, fitsaboana, ary ny vokatra mba ho refesina. Ankoatra izany, fa fanandramana mitranga amin'ny rafitra iray ihany, ny mpikaroka dia tokony hihevitra fa mety ho ny vokatry entin'ny rafitra-fihetsehana manokana (ohatra, ny fomba laharana faha tetikasa Kickstarter, na ny fomba change.org laharana fangatahana, mila fanazavana fanampiny, jereo ny fifanakalozan-kevitra momba ny algorithmic mampifangaro ao amin'ny Toko 2). Farany, rehefa hirotsaka an-tsehatra eo amin'ny asa mpikaroka rafitra, mamitaka etika fanontaniana mipoitra momba ny mety ho voka-dratsy ny mpandray anjara, tsy mpandray anjara, sy ny rafitra. Hodinihintsika ireo fanontaniana etika amin'ny an-tsipiriany tao amin'ny Toko faha 6, ary misy tsara dia tsara momba ny azy ao amin'ny fanazavana fanampiny amin'ny van de Rijt (2014) . Ny varotra-offs izay tonga miaraka miasa ao anatin'ny rafitra misy dia tsy tsara ho an'ny tetikasa rehetra, ary noho izany antony mpikaroka sasany manao ny andrana ny rafitra, ny lohahevitra ny fizarana manaraka.
Table 4.2: Ohatra ny andrana amin'ny rafitra efa misy. Ireo fanandramana toa latsaka ao sokajy telo lehibe, ary izany dia mety hanampy anao endrika efa mahatsikaritra fanampiny fahafahana manokana fikarohana. Voalohany, misy fanandramana izay tafiditra mivarotra na mividy zavatra (ohatra, Doleac and Stein (2013) ). Faharoa, misy fanandramana izay anjara nanolotra ny fitsaboana ny mpandray anjara manokana (ohatra, Restivo and Rijt (2012) ). Farany, misy ireo izay tafiditra nanolotra fanandramana fitsaboana ny zavatra manokana toy ny fangatahana (ohatra, Vaillant et al. (2015) ).
Vokatry ny barnstars amin'ny fandraisana anjara ny Wikipedia Restivo and Rijt (2012) , Restivo and Rijt (2014) , Rijt et al. (2014)
Vokatry ny manohitra ny antsojay hafatra tamin'ny bitsika mpanavakavaka Munger (2016)
Vokatry ny lavanty fomba amidy vidin'ny Lucking-Reiley (1999)
Vokatry ny laza amin'ny vola an-tserasera Auctions Resnick et al. (2006)
Vokatry ny hazakazaka ny mpivarotra eo amin'ny fivarotana ny karatra ao amin'ny eBay mpanao baseball Ayres, Banaji, and Jolls (2015)
Vokatry ny hazakazaka ny mpivarotra eo amin'ny fivarotana ny iPods Doleac and Stein (2013)
Vokatry ny hazakazaka ny vahiny amin'ny Airbnb Rentals Edelman, Luca, and Svirsky (2016)
Vokatry ny fanomezana eo amin'ny fahombiazan'ny tetikasa tao amin'ny Kickstarter Rijt et al. (2014)
Vokatry ny hazakazaka sy ny foko amin'ny fampiantranoana Rentals Hogan and Berry (2011)
Vokatry ny tsara ampy amin'ny ho avy naoty amin'ny epinions Rijt et al. (2014)
Vokatry ny sonia eo amin'ny fahombiazan'ny ny fangatahana Vaillant et al. (2015) , Rijt et al. (2014)